Iibhola ezi-2 eziHlanganisiweyo zePC
Iibhola zoKhenketho ezi-2
Iibhola zoKhenketho ezi-3-PC (Ionmoer)
Iibhola zoKhenketho ezi-3-PC (e-Urethane)
VENSEN Golf yinkampani leyo eyilawula yokuvelisa, uyilo, uphuhliso kunye nokuthengiswa zonke iintlobo iibhola yegolufa. Lo mzi-mveliso kuthatha indawo ye-5, 000 square metres. Le nkampani ibekwe kwiPhondo Jiangsu, China, ngokuhanjiswa lula yaye indawo evumayo geographical.
Le nkampani isebenzisa izixhobo yokungenisa langaphandle, mvume izinto, kwaye inyanda kwabasebenzi abanezakhono abanamava yobungcali yobugcisa, ukuze kuqinisekiswe ukuba zonke ibhola yegalufa ukususela mveliso na umgangatho ethembekileyo ophezulu.
ngeso lenyama Hlola
Iingcebiso zabaqalayo ukuziqhelanisa negalufa yangaphakathi
Ukuzithemba eChina kwaye Akukho mfuneko yokoyika
Sinike email yakho kwaye imihla iya kuhlaziywa kunye iziganeko zamvanje, ngokweenkcukacha!